I-Raw DMBA powder (71776-70-0) Abavelisi - Phcoker Chemical
I4-Methyl-2-pentanamine hydrochloride (DMBA) powder (71776-70-0)
I-4-Methyl-2-pentanamine hydrochloride (DMBA) powder, .......
Amandla: 1560kg / inyanga
SKU: 71776-70-0 Udidi: Ukuhla ukusinda
I-4-Methyl-2-pentanamine hydrochloride (DMBA) powder (71776-70-0) ividiyo
I4-Methyl-2-pentanamine hydrochloride (DMBA) powder (71776-70-0) Iinkcukacha
Igama lemveliso I-4-Methyl-2-pentanamine hydrochloride (DMBA) i powder
Igama leKhemikhali 1,3-Dimethylbutylamine hydrochloride; 2-Pentanamine, 4-methyl-, hydrochloride (9CI)
Iqela leziyobisi khuthaza
Inani leCAS 71776-70-0
I molecular Fi-ormula C6H15N.HCl
I molecular WSibhozo 137.65
IMasaisotopic Mass 137.097122 Da
Ukuxuba Point 110-120 ° C
Sukufaneleka I-insoluble emanzini kunye ne-soluble kotywala, i-ether i-solvents
Sisibetho Tukushisa indawo epholileyo epholileyo
Aukuguquka esetyenzisiweyo kwisigaba sokulinganisela apho unokunciphisa ngokukhawuleza iziphumo zokunciphisa iziphumo ezibangelwa kukushisa.
ekrwada 4-Methyl-2-pentanamine hydrochloride (DMBA) powder (71776-70-0) Inkcazelo
I-4-Methyl-2-pentanamine i-hydrochloride (DMBA) ipowder, i-intermediate ye-pharmaceutical, i-synthetics, kunye ne-catalyst, imveliso yokunakekelwa kwempilo, njl. Kwiinkonzo zempilo, i-1,3-dimethyl amine hydrochloride inokwandisa amandla, ihlaziye kwaye iphucule umzimba amandla, okanye i-calorie restriction restriction iqokelela amandla ngokukhethekileyo.Usetyenziswe kwisigaba sokulinganisela apho unokunciphisa kakhulu ukufuna ukunqanda ukudla okubangelwa ukushisa. Kukho iingxelo ze-1,3-dimethyl amine hydrochloride kunokunyusa ukuqina, ukuphucula ingcinezelo, ukunyusa kakhulu ukutya, ukuvimbela umdla . Kananjalo ingasetyenziswa njenge-caffeine kunye nezinye izithako ezinezongezo zokutya.
Ukusetyenziswa kwe-4-Methyl-2-pentanamine hydrochloride (DMBA) powder (71776-70-0)
Iimviwo eziphambili zezobisi, i-organic synthesis synthesis kunye ne-catalyst, kunye nezinye iimveliso zonyango.
Iimveliso zempilo ezincinci
Izinzuzo ze-4-Methyl-2-pentanamine hydrochloride (DMBA) powder (71776-70-0)
Kwiinkathalo zempilo, i-4-Methyl-2-pentanamine hydrochloride (i-DMBA) inokwandisa amandla, ihlaziye kwaye iphucule amandla omzimba, okanye iinqwelo ze-calric restriction ziqokelela amandla ngokugqithiseleyo.
Ukulahleka kwesisindo, ukusetyenziswa kwe-4-Methyl-2-pentanamine hydrochloride (i-DMBA) ephedrine enezinga elifanayo le -AMPM emzimbeni unokuphucula, ukukhuthaza ukucola kwamafutha omzimba.
4-Methyl-2-pentanamine hydrochloride (i-DMBA) kwimveliso yezempilo enokumnceda apho unokunciphisa kakhulu ukunciphisa ukutya okubangelwa yi-thermogenesis.
I-4-Methyl-2-pentanamine i-hydrochloride (i-DMBA) inokunyusa amandla emzimbeni, ukuphucula uxinzelelo, ngokukhawuleza ukuvimbele ukunyanzelwa kwesondlo.
I-4-Methyl-2-pentanamine i-hydrochloride (i-DMBA) kunye nezinye iinkampani ezine-cafeine nezinye izithako njengokuxutywa kwezongezelelo zokutya.
I-1,3-Dimethylbutylamine powder (108-09-8)
I-1,3-Dimethylbutylamine (1,3-DMBA) i powder, okanye nje i-dimethylbutylamine (i-DMBA), isichengisiso esichukumisayo ......
Amandla: 1490kg / inyanga
I-Raw (1,5-dimethylhexyl) powder powder (5984-59-8)
I-raw (i-1,5-dimethylhexyl) i-ammonium powder i-chloride yintshisekelo yendawo kunye ......... ..
Amandla: 1400kg / inyanga